Ego ole bụ igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Lyft anyịnya igwe - onye ndu kachasị
Lyft anyịnya igwe - onye ndu kachasị
Ego ole bụ igwe kwụ otu ebe?
Bay Wheelsanyịnya igwena ebikes dị ugbu a naBuliengwa, bido na $ 3 kwa otu.
Oh chim lee onye ọ bụ, hey ọ bụ m, courtney na m kylewe na-achọ eletriki divvyso divvy bụ igwe igwe bikeshare ebe a inchicagound ha bidoro ụnyaahụ ma ha nwere enyemaka eletrik na ị nwere ike ịkwọ ụgbọala ruo kilomita 15 kwa elekere na enyemaka, gịnị bụ? Nke kachasị mma na nke na-atọ ụtọ na anyị niile ga-enweta ndị Chicago na-anwale nke a ugbu a ọ naghị adị mfe ịnwale ozugbo, yabụ nke ahụ dị mma, enwere nsogbu ụfọdụ okwu ịkwụ ụgwọ na mmemme anyị. m na-aga na-na a oge dina na ya Ma anyị nwere obi ụtọ na-agbalị ha. Nsogbu bụ, anyị nwere ike ịchọta divvy? Are na-ekpo ọkụ ị na-ewu ewu ma ugbu a ọ dị ka ịnwere ike ịchọta otu n'ọdụ ụgbọ oloko ị nwere ike ịchọta onye ọzọ dị nso? Anyị ga-anwa ịhụ n'akụkụ Irvingpark ka m mara kpọmkwem ebe nke ahụ bụ? nwamba isokay na-anọdụ ala ndị ahịa n'okporo ụzọ na sheridan ee ha dị ezigbo nsoyone na otu enwere enwere ike karịa gaa gaa n'ogige ntụrụndụ mepere emepe, nke ahụ bụ ihe ọzọ anyị nwere, ee, ọ dị mma yabụ melite ogige a ka lechara anya ọzọ tupu anyị apụ ma enwere mmadụ abụọ na ọdụ dị nso, yabụ ka anyị nwaa ya, ọ ga-eme ihe n'eziokwu, o nwere abụọ, anyị nwere ihu ọma. , ugbu a anyị dị nnọọ mkpa ịchọta ebe igbachi anyị igwe kwụ otu ebe akụkụ ya mere, ebe ha na-, ha mara mma na ndị ọhụrụ, mara mma nke ukwuu na otu n'ime ihe ọhụrụ atụmatụ banyere ndị a bụ na ha nwere eriri mkpọchi ka i wee nwee ike mezue ya, ihe ọ bụla enwere ike na ọ dịghị ka ọdụ ụgbọ mmiri dimkpa dị ka nke a. Nwere ike tinye ya na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ osisi.
Nke a bụ ebe ọ na-adọrọ mmasị n'ezie n'ihi na ọnụahịa maka ihe ndị a dị iche iche ka ị nwee mgbanwe gị ebe ọ dị mgbe ọ bụla, mana ugbu a ọ na-agbanwe agbanwe naanị ị nwere ntọala atọ tupu nke ahụ emee ka obi sie m ike na m kwenyere na valvụ ị nwetara batrị gi ebea na mbu odi ka batri bu kilomita iri abuo nke bu ihe m huru mana taa ahuru m na map nke kwuru na o nwere otutu kilomita 25. Ọ na-egosi m ebe a na m nweela igwe kwụ otu ebe n’èzí maka nkeji atọ ugbu a ma enwere m ọtụtụ kilomita 23, yabụ na anyị nwere ntakịrị nso ebe ahụ, anyị nwere ike ịga, ebe dị anya kwesịrị ịdị ogologo? Ọdọ mmiri niile maka nzọ ụkwụ echere m na ị gaghị alaghachi, ị nwere ike gbadaa ebe ahụ wee gbagote ntakịrị wee buru ụzọ laghachi igwe kwụ otu ebe mana ị nọ ebe ụgbọ mmiri ma nwee olile anya na ị ga-ahụ ọzọ. ihe mkpọchi? ọ dị ka ị na-adọpụta ya wee weghachite ya ma kechie ya n'osisi ahụ, um, mana achọghị m ime nke a ugbu a n'ihi na ejiri m n'aka na nke a ga-akwụsị njem m ma m ka ga-eme agaraghị oh oh na ọ dị ka anyị mere otu oche ahụ dị ka ngwaọrụ gara aga mana ọ dị ka ọ dị ntakịrị. Ọ dịkarịrị mfe iji ya mere nke a bụ nnabata nnabata na ihe ndị dị ebe ahụ ebe nkata ọzọ dị ka nke ahụ ma ọ na-adighi ahụ iru ala na ị nweghị ike ịmasị ibu ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ dịghị mma ya mere na nke a ka mma obere ozi ọma, wowso olee otu o si adị ka ọ dị iche na nkewa nkịtị dịka ị naghị adị ka gị? ibu igwe kwụ otu ebe, nke ahụ bụ nnukwu ihe na nkịtị dippy wow onye nwere obi ụtọ ịnwale, ọ dị mma oh my god ihe ndị a na-efe gị nke ọma nwoke a na-eme ka m daa mbà na ihe a enwere m ike ịga ọsọ ọsọ karịa nke ahụ enwere m ọgụ ebe a ya mere, m nwetara ederede site na divi ma ọ ka na-ekwu na m na-anya ụgbọ mgbe ị mechara njem gị, cheta na ị ga-akwụsị ịgba ịnyịnya gị site na ịtinye eriri mkpọchi mkpọ ahụ n'ime ihe ahụ.
Ihe ha na-agwaghị m bụ na ọ ga-eme ka m kwụọ ụgwọ ego dollar abụọ ma echere m na nke ahụ dị mkpa ka ha kwuo mkpọchi eriri a? na ejiji mara mma kay, yabụ gịnị ka ị chere na ha dị iche na ndị divibites nkịtị, ọ dị ọtụtụ ihe dị nro, eh, ị nwere ọ dị mfe karị, nke m chere? ga - eme ka nke a bụrụ ihe a ma ama maka ndị mmadụ mgbe ha nwere ego ọzọ, ee, Tospendi chọrọ n'eziokwu na divis niile bụ ọkụ eletrik ma nwee oke elu ma enweghị ọnụahịa ọnụahịa, mana echere m na nke ahụ bụ ebumnuche kasịnụ site na ihe m nụrụ na dum sistemụ? N'oge ụfọdụ ihe niile bụ eletriki, nsogbu bụ na ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ ma ọ weghị oge iji gafee oge 30. Anyi lebara anya ma anyi di ka oh, eleghi anya anyi ka nwere nkeji ole na ole ma anyi adi ka oh oh, anyi di ka 10? Nkeji ole na ole wee bụrụ na anyị dị mma, anyị nwere ike ịhapụ ya mgbe nkeji iri atọ gachara n'ihi na anyị akwụgogo ya, mana ị nwere ike ịkọwa ya n'ihi na ọbụlagodi na enwere m mgbagwoju anya, amaghị m maka ya, ee, ya mere na ọ bụ dollar atọ na divi. iwere? dị ka mmeri mgbe niile, mana n'elu nke ahụ, maka nkeji ọ bụla ị na-eji, ọ bụ ego 20 ọzọ ruo mgbe ị kụrụ 30 nkeji, yabụ ụgwọ nkeji na-aga n'ihu ruo mgbe ị nwetara $ 9 wee bụrụ naanị $ 3 ọzọ ma gaa n'ihu kwuo na ị si na dollar anọ ma ọ bụ ego dollar anọ gaa dollar atọ ọzọ, ma ugbu a, ọ dị dollar asaa n'elu nke ahụ, ee, ọ dị ọtụtụ, ọ gbagwojuru anya, enwere m mwute, enwere m ya ezighi ezi, ya mere ee , ka anyi mee ya ozo nihi na o di mgbagwoju anya.
Yabụ ọ bụrụ na ị wepụta ya nkeji iri atọ, ọ bụ dọla isii n’elu ndị dollar atọ ahụ, yabụ ọ bụ dollar atọ, were nkeji 30 zuru oke ọ b ụ dollar isii ọzọ, yabụ anyị nọ na iteghete wee gawa 30. ọ bụ ego atọ ọzọ, naanị na-ekwu dollar atọ, yabụ dollar iri na abụọ maka nkeji 31 ​​ma ọ bụ karịa ịnyịnya ígwè, ee akụkụ nke nsogbu ebe a bụ na a na-eji igwe kwụ otu ebe a ọnụ ala n'ihi na ha nwere mkpọchi ndị a na mpaghara ndị na-eme emela? nwere ọtụtụ ọdụ na ị nwere ike ịkpọchi ha na ihe ọ bụla dị jụụ na ihe dị mma bụ na n'akụkụ ụfọdụ nke obodo ahụ bụ eziokwu, ụgwọ a na-akwụ anaghị etinye ya n'ọrụ ọ bụ otu ọnụahịa dị ka jibbyum ọkọlọtọ, mana echere m na nke ahụ bụ na-agbanwe agbanwe ma dị mfe ma ọ bụrụ na enwere ike ịnwe ndị nọ ebe ahụ na-enweghị ike ị nweta otu n'ime mgbaasị ndị a na ọnụ ahịa nke akụkụ ndị ọzọ nke obodo ahụ ugbu a. Echere m na ọbụna n'ógbè ndị ebe ụgbọ oloko na-ezughị ego bụ 5 cents kwa nkeji kama 20 oh n'ezie n'ihi ya, ị ka na-akwụ ụgwọ site na nkeji na akụkụ nke ahụ bụ n'ihi na ha na-echeghachi echiche na ị chọrọ obere oge iji nweta ọdụ ọzọ n'ihi na dị ka akụkụ nke obodo ebe mụ na Kyle bi ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ site na mgbe ị na-aga n'akụkụ ndị ọzọ nke obodo, ha dị ka ọkara kilomita ma ọ bụ mgbe ụfọdụ karịa, ee iche iche, ọ bụghị zuru okè, ọ na-ewe ụfọdụ ọrụ, anyị chọrọ ihe? ezigbo ọrụ na m na-eche na ịnye ọnụahịa Ọdịdị mkpa n'ezie ka a tụleghachi ma anyịnya igwe n'onwe ha, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ngwaike, dị ka ahụmahụ nke ide ha na ha bụ ndị oké, ọ dị ka ehihie na abalị si ochie ngalaba. Echere m na ihe m ga-achọ ịhụ bụ ọnụọgụ ole na ole na-agagharị n'efu nke na-eso ndị otu gị, kwuo dị ka 200 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ bụ n'ihi na mgbe m bụ onye otu nọ n'ọrụ, agbaala m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile mgbe m hapụrụ ụlọ m hopped maka nri abalị mana abụghị m onye ọrụ gị divvy ọrụ m chere na ahụkarị divi ọrụ chọrọ banyere 150. m chere na mgbe m mere banyere ise ma ọ bụ isii na narị asaa njem otú m chere na m nyere ndị mmadụ banyere 200 agafe maka ihe 200 agafe? otu afọ n'efu n'efu mee ya naanị mee ya nke ọma ihe ndị a bụ echiche anyị na ya, daalụ maka ikiri ma mee ka anyị mata ihe ị chere mee ka anyị mara ma ị nabatala e divi ihe ịchọrọ ịhụ ka mma ma ọ bụ ihe ị chere Ha dị mfe ga-achọ ịmata nke ọma anyị ma ọ bụ ma eleghị anya ị nọ n'obodo ọzọ ma obodo gị enweelarị mmemme dị otú a.
Ikekwe ị nwere ike inye anyị echiche gị banyere otu o siri gaa ebe ahụ yana uru na ọghọm ya dị na obodo gị, ọ ga-adị mma ị
Ndị LYFT anyịnya igwe bụ eletriki?
Dị dị ka SixThreeZero na Retrospec wepụtara ebikes na-acha mara mma, ụdị ejiji ejiji na-amasị ndị na-agba ịnyịnya. Idingnya ebe obibi dị ọnụ ala ma dịkwa mma karịa gburugburu ebe obibi karịa ịnya n'ụgbọ ala. Ugbu a, ochie na nsụgharị nkeBulieebikes dị naCalifornia nkeMpaghara Bay, Santa Monica, na Denver.June 2. 2021 g.
Nwere ike ịhapụ ịnyịnya LYFT ebe ọ bụla?
Onye ọ bụla na-agba ịnyịnya kwesịrị ịma ebe ọ ga-ahụigwe kwụ otu ebe, nakwa na hanwere ikena-adọba ya mgbe niileebe obula. Ebikes anyi na-enyegịabụọ kpochidoro nhọrọ: Dock na Bay Bay ọdụ ọ bụla.11 june Dec 2019
Enwere ọtụtụ nhọrọ njem ị nwere ike iji mgbe ị gara DC. Aga m enye gị isii nke kachasị mma, Ndewo! Nabata na njem hacks DC aha m bụ Rob, Abụ m onye ndu na ebe a n'isi obodo ahụ. Ọ bụrụ na ị bịarute Washington DC ma na-achọ ndụmọdụ, aghụghọ, na hacks kachasị mma maka ịgagharị obodo ahụ, denye aha na ọwa a ma kụọ akara mgbịrịgba ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla, m ga-enwekwa mmasị na m n'onwe m na-egosi gị gburugburu mgbe ị dobe site.
Wee gaa na weebụsaịtị m TripHacksDC.com iji hụ njegharị m na-enye. N'isiokwu a, m ga-egosi gị ụzọ isii kachasị mma nke njem iji gaa DC, ọ nweghị nke gụnyere ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ịdebe ụgbọ ala.
Ọ bụrụ na ị bi na DC ma ọ bụ nọrọ ebe ahụ tupu, biko hapụ otu okwu n'isiokwu a ma mee ka m mara ụdị njem njem ị masịrị gị. Ma ọ bụghị ya, ka anyị bido
N'uche m, ọ nweghị ụzọ ka mma isi gafere Washington DC karịa iji ụkwụ gị. Washington DC bụ obodo maka ije, enweghị mgbagha maka nke ahụ. Ma ọ bụrụ na ị bi n'ime obodo, enwere ike ị ga - enwe ọtụtụ n'ime ije ije karịa ka ị nwere ike iche.
Ihe kachasị mkpa maka ịkwakọ maka njem Washington gị bụ akpụkpọ ụkwụ na-eje ije kachasị mma ị nwere. Echegbula onwe gị banyere ịchọ nkecha mgbe ị na-ejegharị na obodo, Mlọ Ahịa Mba, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Ọ bụrụ n ’isi ebe ị na-amali mgbe ụgbọ ala na-aga ebe ọ bụla, ị nwere ike ọ gaghịdị eche ije ije.
Ọ bụ ya mere m ji akwado iji ngwa dị ka Citymapper ma ọ bụ Google Maps iji chọpụta mmalite na ebe ị ga-aga ma hụ ma ịga ije bụ nhọrọ dị mma. O nwere ike iju gị anya na ị nọ nso ọtụtụ ihe. Na mgbakwunye, ọ bụ ahụmịhe dị jụụ ị ga-ejegharị n'obodo ma hụ ihe niile n'ihu gị kama ịnyagharị n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ n'oche azụ nke tagzi ma ọ bụ Uber.
Ma eleghi anya akụkụ kachasị mma banyere njem ụkwụ bụ na ọ naghị efu gị dime. Ọ bụrụ na ị bụ karịa onye na-agba ịnyịnya karịa onye na-agafe agafe, Isi Obodo Bikeshare bụ maka gị. Isi Obodo Bikeshare bụ otu n'ime atụmatụ izizi igwe kwụ otu ebe na North America mgbe ọ malitere na 2010, yana m chere na ọ ka bụ otu kachasị mma maka njem maka naanị ị ga - esi A ruo B.
A na-akwụ ụgwọ ndị ahụ ka ọ bụrụ na ị na-agbachi igwe kwụ otu ebe n'èzí, ọ ga-efu gị ọzọ Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya mbụ, pịa wee lelee ederede m na Iji Capital Bikeshare ka ị wee ghọta ihe niile gbasara etu ọnụahịa si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe maka ogologo njem, ma ọ bụ naanị ogologo njem gburugburu obodo, ana m akwado ịgbazite mgbazinye oge niile site na ebe dị ka igwe kwụ otu ebe na mpịakọta kama. Ma hụ na ibudata Spotcycle ngwa ka ị ghara ịbanye n'ime ihe efu n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ jupụtara nke anyịnya igwe.
Otu ihe ikpeazụ ị ga-ekwu bụ na ịnwere ike ịgba ịnyịnya ígwè n'ebe ọ bụla na National Mall, mana ịgba ịnyịnya bụ iwu na-akwadoghị n'okporo ụzọ dị na obodo DC. Enweghi mmanye mmanye ya, mana biko zere uzo ozo ma oburu na ino na National Mall. Hụ ya n'anya ma ọ bụ kpọọ ya asị na onye ọ bụla maara banyere DC Metro.
Maka ndị ọbịa oge mbụ, metro na-adịkarị ka ụzọ kachasị mma isi gafere obodo. Mgbe ụfọdụ ọ bụ, mana oge ụfọdụ ọ bụghị. Ebe ọ bụ na maapụ ụzọ okpuru ala agaghị agbago, ọ na-adịkarị ka ọ dị mkpa ka ị banye na ụzọ ụgbọ oloko iji si n’otu ebe gaa ebe ọzọ mgbe ije ije n’ezie ga-adị ọsọ ọsọ, dịkwa mfe, dị ọnụ ala ma dịkwa mfe karị.
Gbalịsie ike ilele Citymapper tupu ị banye na metro iji jide n'aka na nke a bụ n'ezie nhọrọ kacha mma. Ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iburu metro ahụ, pịa isiokwu m na Tendo na Dont ka i wee nwee ike ịnya ụgbọ ala dị ka pro mgbe ị rutere ebe a. Akụkụ nke usoro ụgbọ njem anyị na-echezọkarị bụ ụgbọ ala dị ala.
Imirikiti ndị njem nleta na-abanye ụgbọ oloko ma were ụzọ ụgbọ oloko n'oge ụfọdụ n'oge njem ha, mana obere obere ka ha were bọs, nke bụ ihe ihere n'ihi na nke a na-abụkarị nhọrọ kacha mma. Na ogbe ndịda DC, ị nwere ike ihu ụgbọ ala abụọ: Metrobus na Circulator. Metrobus nwere ụzọ dị ogologo nke na-adịkarịrị ndị obodo uru.
Circulator nwere ụzọ dị mkpumkpu na-eje ozi ebe ndị njem ama ama dị ka National Mall, Georgetown, na Dupont Circle. Ihe dị mma gbasara Circulator ugbu a bụ na ọ na-efu nnukwu ihe karịa Metro ma ọ bụ Metrobus. Carpooling mgbazinye agbanweela n'ụzọ dị egwu na DC n'ime afọ ole na ole gara aga.
Mgbe m bidoro dịka onye ndu njegharị, nanị ezigbo ụzọ ịgbazite mbuli bụ site n'ịpụ n'okporo ámá na ịkpọ tagzi. Ndị njem nleta nwere mmasị na mma, mana n'oge ahụ ọ bụ naanị ego, ọ dị oke ọnụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala DC nwekwara nke ahụ? aha maka iwepụ ndị mmadụ. Site na ngwa ndị na-agba ịnyịnya, ndị mmadụ ugbu a nwere nchekwa ma dị mfe karị iji dọọ njem n'ihi na ha na-eme ya n'ụlọ n'ụlọ Echela na nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi ga.
Rgbọ ndị a nwere ike ịbụ ezigbo ọnụ ala n'otu n'otu, mana ọ bụrụ na ị dabere na ngwa iji nweta gị ebe ọ bụla, njem ndị a nwere ike ịmalite karịa oge. M na-agbakwunye tagzi mmiri na isiokwu a, ọ bụ ezie na ọrụ ejedebeghi oke na 2017 ebe enwere nnukwu mgbasawanye emere mgbe ọrụ wharf ọhụrụ na Southwest mepere mgbe afọ a gasịrị. E nwere n'ezie mpaghara ole na ole n'akụkụ mmiri gụnyere Georgetown, National Mall, Southwest Waterfront, na Navy Yard, nke ahụ bụ naanị DC. Y nwekwara ike ịbanye ụgbọ mmiri na ndịda na Potomac iji ruo Alexandria.
N'oge a, tagzi mmiri bụkarị ihe na-adọrọ mmasị ndị njem. Ndị obodo anaghị eji ya eme ihe dịka ọ dị oke ọnụ. Mana ọ bụ ụzọ na-atọ ụtọ ị ga-esi gaa Alexandria, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem ụbọchị ole na ole ebe ahụ ma ọ bụrụ na mmụba ahụ emee n'ọdịnihu, ọ nwere ike ịba uru karịa.
Ya mere, jide n'aka na ịdenye aha na njem hacks DC na mmadụ mgbasa ozi n'ihi na mgbe mmelite dị ka nke a na-abịa, m ga-eziga ha n'ebe ahụ. Ma nke ahụ bụ ya! Daalụ maka ilere edemede a. Ọ bụrụ na ịchọta na ọ na-enyere aka, ịnwere ike ịdenye aha na ọwa a site na ịpị akara ngosi HacksDC Njem nke gosipụtara na ala nke ihuenyo ahụ.
Ma ọ bụrụ na ị bịarute DC ma chọọ ịdebanye aha m na nzuzo, ịnwere ike ịpị dome Capitol n'akụkụ aka ekpe nke isi m iji gaa na ebe nrụọrụ weebụ TripHacksDC.com m, ebe ị nwere ike ịhụ njegharị nke m na-enye . Enwee njem gị!
Kedu ka m ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe LYFT?
CHETA. Mgbe oleanyịnya igwedị na mpaghara gị, akara ngosi ahụ ga-egosi na ala nke gịBuliengwa obibi.
Kedu onye dị ọnụ ala karịa LYFT ma ọ bụ Uber?
UberNye ọnụahịa. N'ihi na ha na-asọmpi ihu, enweghị ndị mmeri doro anya na ọnụahịa makaBulienaUberịnye ọnụahịa. Ọ bụrụBuliedị ukwuudị ọnụ ala karịakarịaUber,Uberga-apụ azụmaahịa, ma ntụgharị. Basic rideshare akwụ ụgwọ maka ha abụọ bụ ihe dịka $ 1 ịmalite, $ 2 kwa mile, na $ 0.25 kwa nkeji.Ọkt 17 2019
Gịnị bụ ebike LYFT?
Mee igwe eletrik
Nke a bụ ụdị ngwakọ mbụebikena-enye gị ohere ịbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri Bay ọ bụla ma ọ bụ jiri eriri ahụ kpọchie ebe ọ bụla ịnyịnya ígwè na mpaghara ọrụ.
Ọ dị njọ ịhapụ igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ ala?
'Ọ gwụla maigwe kwụ otu ebedị na igbe ahụ ma ọ bụ gbochie ya na anyanwụ, ị nwere ike imebi agba gị ngwa ngwa karịana-ahapụọ dị n'oche azụ gị. Nọvemba
Ọ dị mma ịhapụ igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ ala n'abalị ahụ?
Mba. Mara mma ọtụtụ ihe ọ bụla fọdụrụ naụgbọ alama ọ bụ gwongworon'abalịga-emecha zuru. Anọ m ga-eme, otu n'ime ha agaghị m. Otu dị oke ọnụ.June 12. 2009 r.
otú e si tụọ ahụhụ maka igwe kwụ otu ebe
Kedu otu ọsọ LYFT anyịnya igwe na-aga?
Ogwe abụọ ma ọ bụ kilomita abụọ,BulieNdị skuutagabaruo 15 MPH ma ọ bụ ụzọ kachasị ọhụrụ, ụzọ dị ọnụ ala iji nweta gị ebe ị nọna-aga- na enwere ike kporie ndụ mgbe ị nọ ya.
Gini mere LYFT ji dị oke ọnụ ugbu a 2020?
Ebuliọnụahịa maka ndị ahịa
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike mejupụta ọnụahịa dị elu maka ịnyagharị n'oge oge nke nnukwu okporo ụzọ na ọnọdụ nnweta na-achọ. Ma Uber naBuliegwa ndị ahịa n'oge ịme ndoputa ahụ ma ọ bụrụ na a ga-enwe oke ego na mmetụta.Bulienke onye isi na onye nchoputa bu Logan Green na-aga.Mar 22 2021
Kedu ihe kpatara LYFT ji dị ọnụ ala karịa Uber?
Bulienwere ike na-enye adị ọnụ ala karịana-agba ịnyịnya n'ihi na ha na-agba chaa chaa oge ọkwọ ụgbọ ala agaghị eme oke ego haya mereha ga-adabaghịUber sikwuo ugwoBọchị 20 2019
Kedu ka ị ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe na Lyft?
Mgba abụọ ma ọ bụ kilomita abụọ, igwe kwụ otu ebe bụ ụzọ egwuregwu na ọnụ ala ị ga-esi gafee. Mgbe ị nọ na mpaghara ọrụ Bay Bay, akara ngosi ahụ ga-egosi na ala nke ebe obibi gị ngwa ngwa Lyft. Pịa 'Mepee igwe kwụ otu ebe' na ngwa Lyft iji zụta $ 3 Single Gbaa ịnyịnya, wee nyochaa QR koodu na azụ nke igwe kwụ otu ebe.
Kedu mgbe Lyft banyere n'ahịa igwe kwụ otu ebe?
Lyft banyere n'ahịa e-bike na 2018 mgbe ọ zụtara New York City nke dabeere na Motivate, nke na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri igwe kachasị ukwuu nke obodo. Tupu afọ ahụ, Motivate amalitela ịnwale ebikes na New York, Washington DC na San Francisco na ha na-ewu ewu ngwa ngwa karịa igwe kwụ otu ebe mgbe niile.
Ego ole ka Bay Wheels na-eri na Lyft?
Chọpụta eme. Bay Wheels anyịnya igwe na ebikes dị ugbu a na ngwa Lyft, na-amalite site na $ 3 kwa otu. Mgba abụọ ma ọ bụ kilomita abụọ, igwe kwụ otu ebe bụ ụzọ egwuregwu na ọnụ ala ị ga-esi gafee.